एजेन्सी । मेकअप गर्दैमा अनुहारको चमक आउने होइन । मेकअपले त केवल अनुहारको दाग, चाउरीपन आदि ढाकछोप गर्ने हो । अर्थात मेकअप भनेको अस्थायी विधी हो, अनुहारलाई आकर्षक देखाउने । यद्यपि अनुहारलाई मेकअप बिना नै कसरी चम्किलो, मुलायम र ताजा देखाउने ? यसका लागि प्राकृतिक विधी अपनाउनुपर्छ । अनुहारमा चमक ल्याउनका लागि सम्पूर्ण शरीर नै तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । पाचन यन्त्र चुस्त हुनुपर्छ । शारीरिक रुपमा सक्रिय, तन्दुरुस्त एवं स्वस्थ्य व्यक्तिको अनुहारमा...
काठमाडौं । यी ५ राशि हरूले जीवनमा कहिले हार मान्दैनन् । आफ्नो लक्षे प्राप्तीकालागि यी राशिहरू कडा मेहनत गर्ने गर्दछन् । ति हार नमान्ने राशिहरू यी हुन् । कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) कर्कट राशि भएकाले आफ्नो कामको नतिजा खोज्ने गर्दछन् । यस कारण उनीहरु कुनै पनि कामको जिम्मा लिन्छन् भने त्यसलाई पूरा गर्न कुनै कमि राख्दैनन् । सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) आफ्नो क्रोधित स्वभावको कारण यस राशिको व्यक्तिहरूलाई अग्नि तत्वसँग सम्बन्धित मानिन्छ । यी राशि भएका मानिसहरू...
एजेन्सी । तपाईंले पक्कै पनि इनार देख्नुभएको छ होला । कतिले इनारबाट पानी पनि झिकेको हुनुपर्छ । आजकाल धेरैको घरमा नै इनार बनाइन्छ । आफ्नै घरमा नदेखेपनि अन्यत्र देख्नुभएको हुन सक्छ । तर तपाईंले हालसम्म जति पनि इनार देख्नुभएको छ, त्यो सबै गोलो आकारको देख्नुभएको होला । चारकुने इनार सायदै बनाइन्छन् तसर्थ तपाईंले सायदै देख्नुभएको होला । तर, कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? इनार किन गोलो नै हुन्छ ? यदि यो...
एजेन्सी । यदि तपाई विवाह योग्य उमेरको हुनुहुन्छ र आफ्नो लागि उपयुक्त महिला साथी खोजीरहनु भएको छ भने तपाईको लागि यो उपाय धेरै नै फाइदाजनक सावित हुन सक्छ । तपाई चिनो मिलाउने झन्झटबाट टाढा रहन चाहनुहुन्छ भने ज्योतिषका अनुसार महिलाका औंलाहरुले तपाईको खोजीलाई चिनाले भन्दा धेरै सहायता गर्ने बताउँछन् । जो महिलाको औंला चम्किलो, गाँठो रहित हुन्छ त्यस्ता महिलाहरु तपाईका लागि एकदमै शौभाग्यशाली सावित हुन्छन् । यदि तपाईले जीवनसाथीको रुपमा...
काठमाडौं । वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा कुन ठाउँमा के कुरा राख्ने नियमको पालना गर्दा सुखसमृद्धि प्राप्त हुन्छ । वास्तु पालन नगर्दा भने स्वास्थ्य र धन हानिका अलावा अन्य धेरै समस्याबाट ग्रस्त भइन्छ । खराब भएको र टुटेफुटेको सामान घरको कुनामा राख्ने बानी हुन्छ कसै कसैको । पछि फ्याँकौंला नि भनेर कुनामा यसरी फुटेका चीज राख्दा घरमा दरिद्रता आउँछ भनी वास्तुले बताएको छ । यस्ता चीज राख्दा घरमा विराजमान महालक्ष्मी देवी पनि अप्रसन्न...